Ivele ku-MTVBase ivideo yo-DJ baseMgungundlovu | Eyethu News
Ivele ku-MTVBase ivideo yo-DJ baseMgungundlovu
“Sinethemba lokuthi ukuvela kwayo kumabonakude kuzosivulela amathuba amaningi”
ABAFIKANGA bagalelekile endimeni yomculo we-Gqomu nakuba zisezintsha ngokweminyaka kodwa ontanga sebeyazizwa izigi zalezintokazi zaseMgungundlovu. USbongile ‘Dj Lady Sbo’ Songelwa (24) kanye noLindelo ‘Dj Pradar’ Hlongwane (25) baphakamise lesifunda basibeka kwelinye izinga njengoba ingoma yabo abebesanda kuqopha ivideo yayo ngo – August ivele okokuqala kuhlelo lwakumabonakude kwi – DSTV ngo-September iMTV Base.
Lengoma yabo esihloko sithi ‘ Asibambeki’ abasebenze no – Muvo, Zolani G kanye no-Dj Lusiman ekhishwe ngaphansi kwenkampani i- Icon Muzic bathe bajabule kakhulu ngendlela abantu abakhombise ngayo ukuyeseka.
“Sinethemba lokuthi ukuvela kwayo kumabonakude kuzosivulela amathuba amaningi sikwazi ukuqhubekela phambili nokwenza into esiyithandayo. Sakhetha lesihloko njengoba singabantu abasha sifuna kungabikhona izinto ezizosibamba noma zime endleleni yethu sifuna ukuphila impilo,” kusho uLady Sbo.
Uthe umalume wakhe wayengumkwebhi wamapuleti (DJ) ehlezi efundisa abafana wabuka wayithanda lento. Uqhube wathi umalume wakhe wabe eseqala emufundisa ngenxa yokubona ukuthi ababaningi abantu besifazane kulomkhakha.
“Ziningi izinselelo esibhekana nazo kulomkhakha njengoba singabantu besifazane sinokuthatheka kancane bangafuni ukusikhokhela noma basikhokhele imali encane kuneyabantu besilisa. Abanye bathatha izinombolo zethu ngoba befuna ukufeza izinhloso zabo, umuntu afune ukubasebudlelwaneni nawe ukuze ezokusiza ufinyelele empumelelweni,” kusho yena.
Uthe ufuna abantu bazi ukuthi abazele ukuzosebenzisa imizimba yabo ukuze bakwazi ukufinyelela empumelelweni.